प्रावास्टाटिन बनाम लिपिटर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
खेलहरु समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल समाचार औषधि जानकारी, समाचार मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> प्रावास्टाटिन बनाम लिपिटर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
प्रावास्टाटिन बनाम लिपिटर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
प्रावास्टाटिन र लिपिटर (एटोरभास्टाटिन) उच्च कोलेस्ट्रोलको उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधी हो। कोलेस्ट्रॉलको स्तर जुन सामान्य भन्दा बढी छ त्यसले हृदय रोग, संवहनी रोग, हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम बढाउन सक्छ। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतया कलेजोमा एचएमजी ‐ कोए रिडक्टेज इन्जाइमको माध्यमबाट उत्पादन गरिन्छ।
प्रावास्टाटिन र एटोरवास्टाटिन ड्रग हो जुन HMG-CoA रिडक्टसेस अवरोधकर्ताहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। स्ट्याटिन ड्रग्स, प्रवास्टाटिन र एटोरवास्टाटिन इनहिबिट, वा ब्लकको रूपमा पनि परिचित छ, एचएमजी-कोए रिडक्टसेस एन्जाइम, जसले कलेजोमा कोलेस्ट्रोलको उत्पादन घटाउँछ। स्टेटिनको प्रयोगले कलेजोमा एलडीएल (कम घनत्वको लिपोप्रोटिन) रिसेप्टर्सको मात्रा पनि बढाउँदछ, जसले रगतमा एलडीएलको तल्लो तह, वा खराब प्रकारको कोलेस्ट्रोललाई मद्दत गर्दछ।
डेपो काम गर्न कति समय लाग्छ?
दुबै प्रावास्टाटिन र एटोरभास्टाटिनले समान तरिकाले काम गर्दछन्, तर उनीहरूसँग सचेत हुन केहि भिन्नताहरू छन्।
प्रावास्टाटिन र लिपिटर बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
प्रावास्टाटिन प्रावाचोलको सामान्य नाम हो। अन्य स्ट्याटिन औषधिहरू जस्तो नभई, प्रावास्टाटिन व्यापक रूपमा मेटाबोलिज हुँदैन, वा प्रशोधन हुँदैन, CYP3A4 एन्जाइमहरू द्वारा कलेजोमा यसको सट्टा, प्राभस्टाटिन हो पेट मा टुक्रिएको ।
प्रावास्टाटिन जेनेरिक ट्याबलेटहरू १० मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छन्। प्रावास्टाटिन सामान्यतया दैनिक एक पटक साँझमा लिनु पर्छ। यो देखाइएको छ कि pravastatin अधिक प्रभावी छ जब लिन्छ साझमा बरु बिहान भन्दा।
Lipitor एक ब्रान्ड नाम औषधि हो र atorvastatin भनिने जेनेरिक संस्करण मा उपलब्ध छ। प्रवास्टाटिन विपरीत, एटोरभास्टाटिन कलेजोको CYP3A4 एन्जाइमद्वारा भारी प्रक्रिया गरिन्छ। तसर्थ, atorvastatin सम्भाव्य रूपमा pravastatin भन्दा अधिक औषधी संग कुराकानी गर्न सक्छ।
लिपिटर मौखिक ट्याब्लेटहरूमा उपलब्ध छ १० मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्राम। Lipitor बिहान वा साँझ लिन सकिन्छ, र यो प्राय: दैनिक एक पटक लिन्छ।
प्रावास्टाटिन र लिपिटर बीचको मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग HMG-CoA रिडक्टेस अवरोधक HMG-CoA रिडक्टेस अवरोधक
जेनेरिक नाम के हो?
ब्रान्ड नाम के हो? ब्रान्ड नाम: प्रावाचोल
सामान्य नाम: प्रावस्टाटिन ब्रान्ड नाम: लिपिटर
जेनेरिक नाम: एटोरभास्टाटिन
मानक खुराक के हो? १० देखि mg० मिलीग्राम एक पटक १० देखि mg० मिलीग्राम एक पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? लामो समयको लागि लामो समयको लागि
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू; and देखि १ years वर्ष उमेरका बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू वयस्कहरू; १० र १ 10 वर्ष उमेरका बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू
प्रवास्टाटिन र लिपिटर द्वारा सर्तहरू
प्रावास्टाटिन र एटोरभास्टाटिनले हृदयघात र जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ स्ट्रोक कोरोनरी हृदय रोग को लागी मानिसहरुमा। दुबै औषधीहरूले पनि मृत्युको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ मुटु रोग । हृदय रोगको जोखिम कारकहरूमा उच्च रक्तचाप, धूम्रपान र उच्च कोलेस्ट्रोलको स्तर समावेश छ।
प्रवास्टाटिन र एटोरभास्टाटिन दुबै एफडीएलाई एलिभेटेड कुल कोलेस्ट्रॉल र एलडीएल स्तर कम गर्न अनुमोदित छन् (जसलाई हाइपरलिપિडेमिया वा हाइपरकोलेस्ट्रोलिया पनि भनिन्छ)। स्टेटिन औषधीहरूले पनि उपचार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ट्राइग्लिसराइड्सको उन्नत स्तरहरू , जुन शरीरमा फ्याट वा लिपिडको अर्को प्रकार हो। ट्राइग्लिसेराइड्सको उन्नत स्तरको कसैसँग हाइपरट्रिग्लिसराइडिमिया छ।
प्रावास्टाटिन र लिपिटरले रगतमा एचडीएल स्तर पनि बढाउन सक्छ। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रगतमा राम्रो कोलेस्ट्रॉल भनेर चिनिन्छ।
सर्त प्रावास्टाटिन Lipitor
Hyperlipidemia हो हो
हाइपरकोलेस्ट्रोलिया हो हो
Hypertriglyceridemia हो हो
के प्रावास्टाटिन वा लिपीटर अधिक प्रभावकारी छ?
दुबै प्रावास्टाटिन र एटोरभास्टाटिन उच्च रक्त कोलेस्ट्रोलको उपचारका लागि प्रभावकारी औषधीहरू हुन्। अधिक प्रभावी औषधि तपाईंको समग्र स्थितिमा निर्भर गर्दछ, तपाईंको अवस्थाको गम्भीरता, तपाईंले लिनुहुने ड्रग्स, र अन्य कारकहरू।
एक तुलनात्मक अध्ययन हृदय घटनाहरू रोक्नको लागि प्र्यावास्ट्याटिन, सिम्वास्ट्याटिन, र एटोरभास्टाटिनको बीचमा कुनै खास भिन्नता रहेको पाइन। अर्को शब्दहरुमा, यी स्टेटिन औषधिहरु हृदयघात र कोरोनरी हृदय रोग को कम गर्न को लागी यस्तै प्रभावकारी थियो।
TO व्यवस्थित समीक्षा त्यो 90 ० भन्दा बढी क्लिनिकल परीक्षणहरू फ्लुवास्टाटिन, एटोरभास्टाटिन, प्रवास्टाटिन, सिम्वास्टाटिन, र रसुवस्टाटिन जस्ता स्टेटिन ड्रगहरूसँग तुलना गर्दछ। समीक्षाले निष्कर्ष निकाल्यो कि एटोरभास्टाटिन, फ्लोभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिनको हृदय सम्बन्धी घटनाहरू रोक्नको लागि उत्तम उपचार हुने सम्भावना उच्च छ।
तपाईको लागि उत्तम स्टेटिन औषधि निर्धारण गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। रगत परीक्षण गरेपछि र तपाईंको समग्र अवस्थाको मूल्याating्कन गरेपछि, एक प्रदायकले निर्धारित गर्न सक्षम हुनेछ कि प्रभास्टाटिन वा एटोरभास्टाटिन तपाईंको लागि अधिक प्रभावकारी औषधि हो कि होइन। उनीहरूले फरक स्टेटिन औषधि जस्तो कि Zocor (सिम्वास्ट्याटिन) वा Crestor (rosuvastatin) पनि लेख्न सक्छन्।
कभरेज र प्रावास्टाटिन बनाम लिपिटरको लागत तुलना
प्रावास्टाटिन एक जेनेरिक औषधि हो जुन प्राय: मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले ढाक्छ। प्रावस्टाटिनको औसत नगद मूल्य 30० दिनको आपूर्तिको लागि $ १२। ..99 को आसपास छ। एकलकेयर बचत कार्डले प्रवास्टाटिन प्रिस्क्रिप्शनको लागत $ १ than भन्दा कममा कम गर्न सक्दछ।
Lipitor एक ब्रान्ड नाम औषधि हो जुन सस्तो, जेनेरिक संस्करणमा पनि उपलब्ध छ। Lipitor, atorvastatin को जेनेरिक संस्करण प्राय: प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको हुन्छ। ब्राण्ड-नाम Lipitor एक उच्च कोपे संग बीमा योजनाहरु द्वारा कवर गर्न सकिन्छ। Lipitor को नगद मूल्य around 249.99 को आसपास छ। एकलकेयर कूपनले participating १ to लाई लागतमा कम गर्न सक्ने सहभागिता फार्मेसीहरूमा।
मात्रा Tablets० ट्याब्लेट (40० मिलीग्राम) Tablets० ट्याब्लेट (40० मिलीग्राम)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०– $ २० $ 0– $ 16
एकलकेयर लागत + १२ + $ १ + +
प्रावास्टाटिन बनाम लिपिटरको सामान्य साइड इफेक्टहरू
प्रवास्टाटिनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मस्कुलोस्केलेटल वा मांसपेशीको दुखाइ, मतली, बान्ता, पखाला, र टाउको दुखाइ हो। एटोरभास्टाटिनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मस्कुलोस्केलेटल वा मांसपेशीको दुखाइ, पखाला, र जोड्ने दुखाइ (आर्थ्रलजिया) हो। दुबै प्रावास्टाटिन र एटोरवास्टाटिनले अन्य साइड इफेक्टहरू पनि निम्त्याउँदछ जस्तै अपच, चक्कर आना, थकान, दाग, र मूत्र पथ संक्रमण।
काउन्टर मा बनाम नुस्खा इबुप्रोफेन बनाम
गम्भीर स्टेटिन ड्रग्स को साइड इफेक्ट मांसपेशी रोग (मायोपैथी) र मांसपेशि ऊतकहरूको तीव्र ब्रेकडाउन (राबोडोमाइलिसिस) समावेश गर्दछ। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं लगातार वा अस्पष्ट मांसपेशी दुख्ने, कमजोरी, वा कोमलता अनुभव गर्नुभयो।
प्रावास्टाटिन र एटोरभास्टाटिनले पनि माथि उठाइएको कलेजो इन्जाइमहरू निम्त्याउन सक्छ। लिभर एन्जाइम स्तरहरू जाँच गर्नु आवश्यक पर्दछ र उपचार भरि निरीक्षण गर्न सकिन्छ।
Musculoskeletal पीडा हो १०% हो %%
मतली / बान्ता हो %% हो %%
पखाला हो %% हो %%
अपच हो %% हो %%
चक्कर हो %% हो *
टाउको दुखाई हो %% हैन -
थकान हो %% हो *
पुराना हो %% हो *
आर्थ्रलगिया हो * हो %%
मूत्र पथ संक्रमण हो %% हो %%
स्रोत: डेलीमेड ( प्रावास्टाटिन ), डेलीमेड ( Lipitor )
प्रावास्टाटिन बनाम लिपिटरको ड्रग अन्तरक्रिया
प्रावास्टाटिन र एटोरभास्टाटिन समान औषधिहरूको साथ अन्तर्क्रिया गर्दछन्। यद्यपि एटोरभास्टाटिन मुख्यतया कलेजोमा CYP3A4 एन्जाइमले मेटाबोलिज्ड हुने भएकोले यसले कलेजोमा CYP3A4 एन्जाइमहरूलाई असर गर्ने बढी औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
साइक्लोस्पोरिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, वा रितोनाभिर जस्ता औषधीहरू लिएर या त प्राभस्टाटिन वा एटोरभास्टाटिनले रगतमा स्टेटिनको स्तर बढाउन सक्छ, जसले प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ।
एन्ट्यासिडहरूले स्टेटिन औषधिहरूको शोषणमा हस्तक्षेप गर्न र उनीहरूको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछ। एन्ट्यासिडहरू र स्टेटिनहरूको प्रशासन कम्तिमा दुई घण्टा द्वारा अलग गर्नुपर्छ। Cholestyramine ले स्टेटन्सको अवशोषण र प्रभावकारिता पनि कम गर्न सक्छ। Cholestyramine र statins को प्रशासन चार घण्टा द्वारा अलग गर्नुपर्छ।
नायासीन र फाइब्रेट्सले या त प्राभस्टाटिन वा एटोरभास्टाटिनको साथ लिदा मायोपेथी र राबोडोलाइसिसको जोखिम बढाउन सक्छ।
एटोरवास्टाटिनको प्रयोग उपभोग गर्ने बेलाबाट बचाउनुपर्दछ वा निगरानी गर्नुपर्छ अpe्गुरको रस । अंगूरको रस एक CYP3A4 अवरोधकर्ताको रूपमा काम गर्दछ जसले रगतमा atorvastatin को स्तर बढाउन र साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ।
कसरी एक खमीर संक्रमण को खुजली रोक्न
औषधि औषधि वर्ग प्रावास्टाटिन Lipitor
साइक्लोस्पोरिन इम्युनोसप्रेसन्ट्स हो हो
एरिथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक हो हो
पोसाकोनाजोल एन्टिफंगलहरू हैन हो
दारुनावीर एन्टिवाइरल्स हो हो
नियासिन एन्टिलिपेमिक एजेन्टहरू हो हो
जेम्फिब्रोजिल Fibrates हो हो
डिजोक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइडहरू हो हो
Cholestyramine पित्त एसिड क्रमबद्धहरू हो हो
म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड एन्ट्यासिडहरू हो हो
प्रावास्टाटिन र लिपिटरको चेतावनी
सक्रिय लिवर रोग वा उच्च कलेजोको इन्जाइमको स्तर भएकाहरूमा प्रावास्टाटिन र एटोरभास्टाटिनबाट अलग रहनु पर्छ। स्टेटिन औषधीहरूले कलेजो रोग भएको व्यक्तिमा कलेजोको हानी बढाउन सक्छ।
प्रवास्टाटिन र एटोरभास्टाटिनलाई स्टेटिन औषधिहरूमा अतिसंवेदनशीलताको इतिहासको साथ प्रयोग गरिनु हुँदैन। अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाका लक्षण र लक्षणहरूमा पुराना, खुजली, सूजन, र सास फेर्न समस्या पर्दछ।
स्टेटिन औषधीहरूले गम्भीर मांसपेशी क्षति र मांसपेशी दुख्ने जोखिम बोक्छ। त्यहाँ muscle 65 बर्ष भन्दा बढी उमेर भएका वा अनियन्त्रित हाइपोथायरायडिज्म वा मिर्गौला समस्या भएकामा मांसपेशी दुख्ने जोखिम बढ्न सक्छ।
प्रवास्टाटिन र एटोरभास्टाटिन जो गर्भवती वा स्तनपान गराउनेहरूमा प्रयोग हुँदैन।
प्रवास्टाटिन वा एटोरभास्टाटिनसँग सम्बन्धित अन्य सम्भावित चेतावनी वा सावधानीहरूको बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
प्रावास्टाटिन बनाम लिपिटरको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
प्रावास्टाटिन भनेको के हो?
प्रावास्टाटिन एक सामान्य औषधी हो जुन कोलेस्ट्रोल कम गर्न र उच्च कोलेस्ट्रोल स्तरले हुने जटिलताहरूलाई रोक्न प्रयोग गर्दछ। प्रावास्टाटिनको ब्रान्ड नाम प्रावाचोल हो। यो साँझ मा दैनिक एक पटक लिनु पर्छ। प्रावास्टाटिन मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ।
लिपिटर भनेको के हो?
Lipitor एक ब्राण्ड नाम औषधि फाइजर द्वारा निर्मित हो। Lipitor को जेनेरिक नाम atorvastatin हो। यो उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तरको उपचार गर्न र हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न प्रयोग गर्दछ। लिपिटर बिहान वा साँझ एक पटक लिनु पर्छ। यो मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ।
के प्रावास्टाटिन र लिपिटर एकै हुन्?
दुबै प्रावास्टाटिन र एटोरभास्टाटिन औषधी हुन् जसले उच्च कोलेस्ट्रोल कम गर्न प्रयोग गर्दछन्। जे होस्, ती उस्तै छैनन्। एटोरभास्टाटिन मुख्यतया कलेजोको CYP P450 एंजाइम प्रणाली द्वारा मेटाबोलिज हुन्छ जबकि प्राभस्टाटिन पेटमा बिग्रिएको हुन्छ। प्रावस्टाटिन प्राय: राती लिइन्छ जबकि लिपिटर बिहान वा साँझ लिन्छ।
के प्रावास्टाटिन वा लिपिटर राम्रो छ?
दुबै प्रावास्टाटिन र लिपिटर स्टेटिन थेरापीको प्रभावकारी रूपहरू हुन्। दुबै औषधीहरूले उच्च कोलेस्ट्रॉलको जटिलताहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ, जस्तै एथेरोस्क्लेरोसिस, हृदयघात, र स्ट्रोक। बाट केहि अध्ययन हृदय विज्ञान पत्रिका हृदयको दौरा र स्ट्रोक जस्तै कार्डियोभास्कुलर घटनाहरू रोक्नको लागि अन्य स्ट्याटिन औषधिहरू भन्दा Lipitor मा सक्रिय घटक, atorvastatin अधिक प्रभावी छ भन्ने फेला परेको छ। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तपाइँ को लागी सबै भन्दा राम्रो statin औषधि मा चिकित्सा सल्लाह प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
के म गर्भवती हुँदा प्रावास्टाटिन वा लिपिटर प्रयोग गर्न सक्छु?
प्रवास्टाटिन र एटोरभास्टाटिनलाई गर्भवती हुँदा लिन सिफारिस गरिदैन। दुबै औषधीहरूले जन्म दोष पैदा गर्ने उच्च जोखिम बोक्छ। गर्भवती हुँदा उच्च कोलेस्ट्रॉलको उत्तम उपचारको लागि निर्देशनको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म प्रवास्टाटिन वा मदिराको साथ लिपिटर प्रयोग गर्न सक्छु?
मध्यम मदिरा सेवन र स्टेटिनको साथ कुनै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम छैन। स्टेटिन ड्रग्स र रक्सीको अत्यधिक खपत कलेजो बिगार्न सक्छ । एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् जब यो स्टेटिन औषधि लिईएको बेला तपाईलाई रक्सी पिउनु सुरक्षित हुन्छ वा हुँदैन।
रिपोर्ट: COVID-19 महामारीको बखत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लोकप्रियताको वृद्धि र गिरावट
वालमार्ट $ List सूची: वालमार्ट प्रिस्क्रिप्शनमा कसरी बचत गर्ने
कसरी घरमा पैरको औंला कवक उपचार गर्न
cvs मा फ्लू कती छ
गोली को काम पछि बिहान कति लामो हुन्छ?
कसरी एक uti बाट छुटकारा पाउन
गर्भावस्थामा तपाइँ कुन दुखाईको औषधि लिन सक्नुहुन्छ?
तपाइँ योजना लिनुभए पछि के हुन्छ b